विदेशबाट आउँदा एकसरो सामानमात्र ल्याउने | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी विदेशबाट आउँदा एकसरो सामानमात्र ल्याउने
on: २० आश्विन २०६९, शनिबार ००:०० रोजगारी
वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्कंदा प्रायः जसो कामदारले टेलिभिजन, घडी, ब्लाङ्केटजस्ता सामानहरू ल्याउने गरेका छन् । कतिपय कामदारले विदेशमा राम्रो तथा सस्तो सामान पाइने हुनाले एकैथरीका सामान धेरै किनेर ल्याउने गरेका छन् । तर, एकै प्रकारका सामान धेरै ल्याउँदा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) भन्सार कार्यालयमा बढी भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा स्वदेशमा भन्दा विदेशबाट ल्याएको सामान महँगो पर्ने टीआईए भन्सार कार्यालयका प्रमुख तोयम रायाले बताए । विदेशबाट कुनै पनि सामान एक÷एक ओटा मात्र ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
टीआईए भन्सार कार्यालयले कुनै पनि सामान एक थानमात्र ल्याउँदा शुल्क लिँदैन । विदेशमा रहँदा आफूले प्रयोग गरेका सामान ल्याउँदा पनि भन्सार शुल्क नलाग्ने राया बताउँछन् । रोजगारीमा गएका प्रायजसो कामदारले विदेशमा छँदा आफुले प्रयोग गरेका सामान तथा टिभी लिएर आउने गरेका छन् । तर, नयाँ टिभी ल्याउँदा भने भन्सार शुल्क लाग्ने उनी बताउँछन् । टिभीको पनि इञ्चअनुसारको भन्सार शुल्क लाग्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर ६ महीनाभन्दा बढी बसेका कामदारले २२ इञ्चसम्मको एलसीडी वा एलईडी टिभी ल्याउँदा प्रतिइञ्च २ सय ५० रुपैयाँ भन्सार शुल्क तिर्नु पर्दछ । २३ इञ्चदेखि २९ इञ्चसम्मको टिभी ल्याउँदा प्रतिइञ्च रू. ३ सय ५० वा रू. ४ सय भन्सार शुल्क तिर्नु पर्दछ । ५० इञ्चभन्दा माथिको एलसीडी वा एलईडी टिभी ल्याउँदा प्रतिइञ्च १ हजार २ सय ५० रुपैयाँ भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने रायाले जानकारी दिए । दशैंका बेलामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारले ल्याएको टिभीबाट मात्रै दैनिक १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म राजस्व उठ्ने गरेको उनले बताए । त्यस्तै कतिपय कामदारले आफ्ना बालबच्चालाई लत्ताकपडा लिएर आउने गरेका छन् । लत्ताकपडा पनि धेरै लिएर आउनु हुँदैन । धेरै कपडा लिएर आउँदा व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याएको शङ्कामा बढी भन्सार शुल्क लाग्दछ ।
ल्यापटप, क्यामराजस्ता सामान पनि नयाँ भन्दा विदेशमा आफूले प्रयोग गरेको समान ल्याउनु उपयुक्त मानिन्छ । विदेशमा रहँदा आफूले प्रयोग गरेको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्दैन । तर, त्यही सामान नयाँ ल्याएमा भन्सार शुल्क लाग्दछ । त्यस्ता सामान विदेशमा सस्तो पाइने आशामा धेरै किनेर ल्याउन नहुने भन्सार कार्यालयले बताएको छ । विदेशबाट लत्ताकपडाजस्ता सामान ल्याउनुभन्दा पनि पैसा नै ल्याउनु उपयुक्त मानिन्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएर समानभन्दा पनि पैसा नै ल्याउनु राम्रो हुने बताउँछन् । ‘नेपाली कामदारहरू मोजमस्तीभन्दा पनि कमाउन वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन्,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले भने, ‘विदेशवाट फाल्तु सामान ल्याउनुभन्दा कमाएको पैसा ल्याएर स्वदेशमा व्यापार व्यवसायमा लगाउनु उपयुक्त हुनेछ ।’